रक्सी नपाएपछि अल्कोहल भएको सेनिटाइजर पिउँदा १० जनाको मृत्यु ! – live 60media
रक्सी नपाएपछि अल्कोहल भएको सेनिटाइजर पिउँदा १० जनाको मृत्यु !
काठमाडौं। अल्कोहल भएको ह्याण्ड सेनिटाइजर पिउँदा १० जनाको ज्यान गएको छ । उनीहरुले रक्सी नपाएपछि विकल्पमा अल्कोहल मिसिएको सेनिटाइजरमा पानी हालेर पिएका थिए । पुलिसलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेअनुसार भारतको आन्ध्र प्रदेशको पकाशम जिल्लाको कुरिचेडु शहरमा यी व्यक्तिहरु मर्ने सिलसिला बुधबार रातीबाट सुरु भएको थियो । बुधबार राती १ जना, बिहीबार राती २ जना र शुक्रबार बिहान अन्य ७ जनाको मृत्यु भएको हो ।
कुल २० जनाले अल्कोहलसहितको सेनिटाइजर पिएको विश्वास गरिएको छ । प्रकाशम जिल्लाका एसपी सिद्धार्थ कौशलले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताएअनुसार यी व्यक्तिहरुले रक्सी नपाएपछि सेनिटाइजर पिएका थिए किनकि कुरिचेडु जिल्लामा कोरोनाभाइरस संक्रमण प्रसार तीब्र भएपछि लकडाउन गरिएको थियो । ‘हामीले स्थानीय पसलबाट सबै सेनिटाइजर बोतल सीज गरेर परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाएका छौं’ एसपी कौशलले भने ‘प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उनीहरुले शुद्ध सेनिटाइजरको घोल पिएको देखिएको छ ।’
स्थानीय दुर्गा मन्दिरबाहिर बस्ने एक भिखारीले पेट पोलेको भनेपछि यो घटनाको खुलासा हुन सुरु भएको थियो । बुधबार राती अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो । बिहीबार बिहान अन्य २ जनालाई पनि पेट पोल्ने समस्या भयो । परिवारले स्थानीयको सहयोगमा उनीहरुलाई दार्सी टाउन अस्पताल लगे तर त्यसै दिन राती उनीहरुको पनि मृत्यु भयो । उस्तै किसिमको समस्यासहित अस्पताल भर्ना भएका अन्य ७ जनाको शुक्रबार बिहान मृत्यु भयो ।
संक्रमण फैलिने क्रम तीब्र भएपछि कुरिचेडु र आसपासका क्षेत्रमा विगत १० दिनदेखि लकडाउन गरिएको छ । सबै मदिरा पसलहरु बन्द थिए । मृतकका परिवारका सदस्यहरुका अनुसार उनीहरु सेनिटाइजर पिएपछि घण्टौंसम्म बेहोस भएका थिए । उनीहरुले कति मात्रामा सेनिटाइजर पिए भन्ने खुलेको छैन । अहिले लकडाउनमा सबै मदिरा पसल बन्द गर्नुअघि आन्ध्र प्रदेश सरकारले गएको मे ४ मा सबै मदिरा पसल खोल्न अनुमति दिएको थियो । मदिरा पसल खुलेसँगै त्यहाँका पसलमा लामो लाइन लागेको थियो ।
← मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्ड कुटिएको घटनास्थल प्रहरीले फेला पार्‍यो
भगवान रामको जन्मबारे यस्तो छ वैज्ञानिक तथ्य →